भारतका अस्पतालमा नभएको उपचार नेपालमै – Himshikharnews.com
भारतका अस्पतालमा नभएको उपचार नेपालमै
८ श्रावण २०७६, बुधबार १७:४३
काठमाडौँ । सुन्धारास्थित काठमाडौं न्यूरो तथा जनरल अस्पतालले पहिलो चोटी एक बालिकाको क्तचष्अतगचभ एबिकतथ धष्तज ब्लयउबिकतथ ध्ष्तज ऋययिकतयmथ ऋयिकगचभ को सफल शल्यक्रिया गरेको छ ।
नेपालमा नै उपचार सम्भव हुने यस्ता रोगबारे र उपचार हुने अस्पतालबारे जानकारी नहुँदा जनताले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । सर्लाही घर भएकी १० वर्षिय अर्चनाकुमारी साह दुई वर्ष अगाडी दुर्घटनामा परेकी थिइन । दुर्घटनापछि उनको मलद्वारबाट दिसाको निकास हुन सकेको थिएन ।
पेटमा प्वाल पारेर पाइप जोडेर दिशा गर्दै आएकी साहको अस्पतालका डा.दिनेशप्रसाद कोइरालाको टिमले सफल शल्यक्रिया गरेको हो । हाल भारतका यी अस्पतालले फर्काएपछि उपचारका लागि आइपुगेकी साह भारतका पाँच अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेपछि मात्र नेपाली अस्पतालमा आएकी हुन् ।
साहलाई पहिला भारतको लखनउमा रहेको पी.जी.ई.अस्पतालमा जाँचको लागि लागिएको थियो । उक्त अस्पतालमा उपचार असम्भब भनेर दिल्लीमा रहेको सर गंगाराम अस्पतालमा जान भनेको थियो । अर्चनाका बुवा निरास हँुदै सर गंगाराम अस्पताल उपचारका लागि छोरीलाई लिएर गए । एकातिर सन्तानको माया त अर्काे तिर अस्पताल धाउँदाको सास्तीले लखतरान भएपनि अस्पताल धाउन भने छाडेनन् ।
उनी सन्तानको मायाले गर्दा एकपछि अर्काे अस्पताल धाइरहे । उनले कतिपनि हारभने मानेन् । सर गंगाराम अस्पतालमा पनि उपचार सम्भब नभएपछि अर्चनालाई फेरी एपोलो अस्पताल, जीवन मल्ल अस्पताल र दिल्लीकै एम्स अस्पताल रिफर गरिएको थियो । एम्स अस्पतालका चिकित्सकहरुले अर्चनाको उपचार भारतमा सम्भब नहुने बताएका थिए ।
अर्चनाका बुवाले साथीहरुबाट यो रोगको उपचार नेपालमा नै सम्भब छ भन्ने सुनेपछि उनी नेपाल फर्केको सुनाउँछन् । छोरीको उपचारको क्रममा उनी काठमाडौँ न्यूरो तथा जनरल अस्पताल आइपुगे र उपचार पनि सम्भव भयो । अस्पतालले बालिकाको उपचार बाल सर्जन डा. दिनेशप्रसाद कोइरालाले गर्ने पक्का भएपछि उनीहरु खुसी भएका थिए । त्यसपछि बालिकालाई अस्पतालमा भर्ना गरी शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
शल्यक्रिया करिब १ हप्ताको अस्पताल बसाईपछि अहिले बालिका पूर्णरुपमा ठिक छन् । यस रोगको उपचारको लागि भारतमा ५ लाखसम्म लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ । तर औषधी सहित अर्चनाको उपचार नेपालमा ७५ हजारमा नै सम्भव भएको अस्पतालले बताएको छ । मेडिकल क्षेत्रमा नेपाल भन्दा धेरै अग्रपंक्तिमा रहेको भारतमा सम्भव नभएको उपचार नेपाली डाक्टरबाट नेपालमा हुनु गौरवको कुरा भएको अस्पतालको भनाइ छ ।
सरकारी तवरबाट पनि नेपालमा भएका अस्पतालले दिने उपचार र डाक्टरहरुको बारेमा आम सर्बसाधारणमा जानकारी दिनु जरुरी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । बाल सर्जन डा. कोइराला अनुभवी सर्जनको रुपमा परिचित रहनु भएको छ । डा. कोइरालाले साहको तीन वटा शल्यक्रिया गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । पेटमा प्वाल पारेर पाइप लगाएर दिसा निकाली रहेको अवस्थामा प्वाल पुर्न चुनौती थियो, डा. कोइरालाले भन्नुभयो ।
सोलुखुम्बुको एक होटलमा आगलागी
थुलुङ दूधकोशीमा वहुप्राविधिक शिक्षालयको
नेकपा सुसासन, विकास र
सोलुखुम्बुका एक कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यू
नेकपा सुसासन, विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न बनेको पार्टीः मुख्यमन्त्री राई
थुलुङ दूधकोशीमा वहुप्राविधिक शिक्षालयको मुख्य मन्त्री राईद्वारा उद्घाटन
सोलुखुम्बुको एक होटलमा आगलागी हुँदा दुई करोडको क्षति
सचिवालय बैठक बस्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले राखे मन्त्रिपरिषद बैठक, अब के होला ?
‘प्रधानमन्त्री ओली कुर्सी मोह र त्रसित मानसिकताबाट ग्रस्त’
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन विकास हुँदै गर्दा व्यवसायिक प्रतिष्पर्धा, कुन कति प्रभावकारी
विश्वभर कोरोना संक्रमित साँढे ५ करोड नाघ्यो